ဘဝမှတ်တိုင်: ♪ Samsung Device တွေမှာကိုယ့်ဆီမှာ Myanmar Font ရှိနေပေမဲ့ Message ပို့တဲအခါအခြားဖုန်းမှာ ????? တွေပဲပေါ်နေရင် ဘယ်လိုပြန်လုပ်ရမလဲ ♫
♪ Samsung Device တွေမှာကိုယ့်ဆီမှာ Myanmar Font ရှိနေပေမဲ့ Message ပို့တဲအခါအခြားဖုန်းမှာ ????? တွေပဲပေါ်နေရင် ဘယ်လိုပြန်လုပ်ရမလဲ ♫
Samsung Device တွေမှာကိုယ်ဆီမှာ Myanmar Font ရှိနေပေမဲ့ Message ပို့တဲ့အခါကိုယ်ပို့လိုက်တဲ့ ဖုန်းမှာလည်း Myanmar Font ရှိနေပြီး????? တွေပဲပေါ်နေရင် ဘယ်လိုပြန်လုပ်ရမလဲလို့မေးတက်ကြလို့ကျတော်ဖြေရှင်းနည်းလေးကို ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါ တယ်။ ကျတော်လည်းမေးတိုင်းပြန်ပြောပေးပါတယ်။ ဒါပေမဲ့မေးတဲ့လူလောက်ပဲ ဒီ error ရဲ့ဖြေရှင်းနည်းလေးကိုသိရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် Samsung Device ကိုင်ဆောင်သူအားလုံးကြုံလာတဲ့အချိန်ဖြေရှင်းနိုင်စေရန် တင်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
ဒီလိုမျိူးဖြစ်လာပြီဆိုရင်တော့ Message setting ထဲမှာလွဲမှားနေလို့ဖြစ်ပါတယ်။ တချို့ကသိပ်မသိကြပါဘူး။ တချို့ဆို Myanmar Fomt ရှိနေရဲ့နဲ့ဖြစ်တာဆိုတော့ Font မကိုက်လို့ထင်ပြီး Font တွေပြောင်းသုံးရင်းနဲ့ တစ်ခါတစ်လေ Firmware ပါကျတဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်တက်ပါတယ်။ တစ်ချို့ကတော့Firmware ကြောင့်ဖြစ်မယ်ထင်ပြီး Firmware ပြန်တင်လိုက်ကြနဲ့ အလုပ်ရှုပ်ပါတယ်။ ဒီ Error ကိုဖြေရှင်းရမှာကတော့ အရမ်းကိုလွယ်ကူပါတယ်။ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုရင်တော့…….
စာရေးသူ kyawsan အချိန် 1/09/2016 08:10:00 pm